C/qaadir Qalabxoor “Cidda diidan in nabadda Gaalkacyo laga shaqeeyo waa Puntland” (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/qaadir Qalabxoor “Cidda diidan in nabadda Gaalkacyo laga shaqeeyo waa Puntland” (DHAGEYSO)
Iyadoo weli xiisado iyo colaado oo u dhaxeeysa maamulada Galmudug iyo Puntland ay ka jiraan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa labadaasi dhinac midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa inuu isaga ogoleyn heshiis iyo in nabad lagu wada noolaado.
C/qaadir Cabdi Jaamac Qalabxoor oo ah wasiirka dekedaha maamulka Galmudug oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay in wada-hadaladii la doonayay in xal loogu helo dagaalada Gaalkacyo islamarkaana dhawaan loo xil saaray guddiyo ka kala socday dowladda dhexe iyo maamulka Puntland iyo Galmudug ay Puntland diiday.
Waxa uu wasiirka sheegay in mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ay sheegeen inay diideen islamarkaana ay sii hurinayaan colaada ka taagan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
“Cidda diidan in nabadda Gaalkacyo laga shaqeeyo waa Puntland, marka iyagaa mas’uuliyadaas qaadaya, maxaa yeelay waa iyaga waxa hor-taagan in maslaxad iyo wanaag wax lagu dhameeyo” Sidaasi waxaa yiri wasiirka dekedaha maamulka Galmudug C/qaadir Qalabxoor.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray C/qaadir Qalabxoor ayaa imaanaya xilli magaalada Gaalkacyo ay weli ka taagan tahay xiisado colaadeed ee u dhaxeeysa maamulada Galmudug iyo Puntland, taas oo markeedii hore ka bilaabatay dhisidda suuq xoolo oo ku yaala inta kala qeybisa koonfurta iyo waqooyiga Gaalkacyo, taas oo ilaa iyo haatan aan xal loo helin.